Myanmar 18 Plus: ဖြစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး ဖြစ်ခဲ့တာ (၂)
ကျွန်တော်လဲ သွားဝယ်မယ် ဆိုပြီး အထွက် "ကို..""ပြော.. နှင်း...""ဟိုဟာလေ မဝယ်နဲ့ တော့ နှင်းဖက် က စိတ်ချရတယ် ပြီးတော့ ရာဘာရဲ့ အရသာက ပူတယ် ကို့ ကို ခွင့်ပြုစေချင်တယ်...""နှင်းရယ် လုပ်မယ့်လုပ်တော့လဲ ကို့ မျှော်လင့်ထားတာထက်တောင်""ဒီအချိန်မှာ
ဒါတွေ ပြောမနေပါနဲ့ တောကိုရယ် .. လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်မှတော့ ကောင်းကောင်း လုပ်တော့မယ်ကိုရယ် ကိုပဲ အစပြု ခဲ့တာမဟုတ်လား""နှင်းအဆင်ပြေသလိုသာလုပ်တော့နှင်းရယ်"
့ မိုက်ကယ် အခန်းဖက် လှည့်တော့ မိုက်ကယ်က အခန်းဝက ထွက်ပြီး လာ ဟန်နီ ဆိုပြီး ခါးလေးကို ပွေ့ ပြီး အခန်းထဲဖက် ခေါ်သွားတော့တယ်။"မျိုး မင်း ကော အဆင့်သင့် ဖြစ်မလား မင်း အိုကေရင် အခန်းထဲ လိုက်ခဲ့လေ""ငါ ခဏနေမှ လိုက်ခဲ့မယ် ..ငါ့ အတွက် တော့ အချိန် နည်းနည်းလောက်ပေးပါ""အိုကေ လေ မင်းဖက်က ဒါ့အတွက် ပြသာနာ ရှိမယ်ဆိုရင် ငါဒါကို ဆက်မလုပ်ပါဘူး""ရပါတယ် ငါ့အတွက်က တော့ အဆင်ပြေအောင်တော့ ကိုယ့်ဖာသာ ကြိုးစားနေရတုန်းပဲ""အေးပါ ငါ တံခါးစေ့ထားခဲ့မယ် မင်းဝင်လာခဲ့ပေါ့ ဟန်နီ လို့ ခေါ်တာတော့ ခွင့်ပြု စေချင်တယ်""ရပါတယ်""မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ရင်စတော့မလား…""အင်း" ဆိုပြီး နှင်း အကျီင်္တွေ စချွတ်လိုက်တယ်။ မိုက်ကယ်က"မင်း စကတ်ကိုတော့ မချွတ်ပဲ နဲ့ အတွင်းခံနဲ့ ပဲ လိင် ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမလား""မင်းသဘောပဲလေ" မိုက်ကယ်က
အဝတ်အစားအကုန် မချွတ်တဲ့ မိန်းကလေးကို ဆက်ဆံရတာ ကို နှစ်သက်တယ်နဲ့ တူတယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ ဘောင်းဘီ ရှည်ကို အကုန် ချွတ်လိုက်ပြီး အောက်ခံ အကျီ င်္ နဲ့ ဘောင်းဘီကိုတော့ ဝတ်ထားတုန်းပဲ။ နှင်းလဲ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကို ကုန်းပြီးချွတ်တုန်း မိုက်ကယ်က နောက်ကနေ ခါးကို လှမ်းဖိလိုက်တယ်။"အမေ့ ………"မိုက်ကယ့် လျှာက နှင်း စကပ်လေးကို လှန်တင်ပြီး ပိပိဖေါင်းဖေါင်းလေးကို လာဆွဲစုပ်တယ်။"အားးးး"ပြွတ်…."ရှီး………ဖြေးဖြေး……"နှင်းတစ်ကိုယ်လုံးက
ကုတင်ပေါ်မှာ မဟုတ်ပဲ ကုတင်ဘေးနားလေးမှာဆိုတော့ လူက အမှုတ်လဲ ခံနေရတော့ ပျော့ခွေပြီး ယိုင်ကျချင်လာတယ်။ မိုက်ကယ်က အလိုက်သိသိနဲ့ခေါင်းကို ခွာပြီးတော့ နှင်းကို ကုတင် ဖက်ကို လှည့်စေပြီး ကုတင်ပေါ်တတ်လိုက်ဆိုတော့ နှင်းလဲ ခုတင်ပေါ်ကို အတက်။..မိုက်ကယ်က နှင်း ဒူး နှစ်ဖက် ကုတင်အပေါ်ကိ်ု အရောက်မှာပဲ ရပြီဆိုတော့ ကုတင်အောက်ကနေ ဆော်မယ်ဆိုတာသိတော့ ကြက်သီးတောင်ထတယ်။ပြန်ကျချင်သလို ဖြစ်နေတဲ့စကတ် အစလေးကို မိုက်ကယ်က အပေါ် ကို လှန်တင်လိုက်တယ်။ နှင်းက အလိုက်သိသိနဲ့ခါးလေးကို ခွက် ပေးလိုက်တယ်။ သေချာတယ် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း နဲ့ ပဲ နောက် ကို စူထွက်နေမှာတော့ သေချာတယ်။အခုလို မမူးပဲ နဲ့အလုပ် ခံရတော့မှာရယ်၊
ကိုယ့် ယောကျားင်္ ကလဲ အပြင်မှာ ရှိနေတယ်။ နှင်း မမှားပါဘူး ကိုရယ်။ ကို ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေ နောက်မှာ နှင်း အခု အရည်တွေ ရွှဲနေပြီကွယ်။ မိုက်ကယ်က နှင်းနောက်မှာ မလုပ်သေးပဲနဲ့နှင်း ဖင် ပေါက်လေးကို ဖြဲကြည့်နေတယ်။"အား…ယားတယ် …ကောင်းတယ် ကွာ"ဖင်ဝ
တစ်ခုလုံးကို လျှာနဲ့အယက် ခံလိုက်ရတယ်။ တကယ်ကို ကောင်းတယ် တစ်ချက်လောက်တော့ တွန်းမိလိုက်သေးတယ်။ တံတွေးတွေက ဖင်ဝတွေမှာကော ပိပိ စောက်ပတ် အဝမှာကော ရွဲစိုနေပြီ လေ။ တံတွေးကြီးပဲ သီးသန့် တော့ မဟုတ်ဘူးရယ်။
နှင်းရဲ့ အရည်တွေလဲ ပါတာပေါ့။ ဒီလောက် လုပ် မှာတော့ အရည် မထွက်ပဲ ခံနိုင်မလား။"အင့် ….ကောင်းလိုက်တာ"လျှာကို အတောင့်လိုက် လုပ်ပြီး ထိုးချတာ ဖင်ဝကချော်ပြီး စောက်ပတ်ထဲ ဝင်သွားတယ်။ဒေါက်..ဒေါက်"မိုက်ကယ် ငါ ဝင်လာပြီ""အိုကေလေ…"နှင်းခေါင်းလေး
တစ်ခြမ်းစောင်းပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် နောက်ကနေ မကြည့်ချင်တာနဲ့ ပဲ ကုတင် ခေါင်းရင်း ဖက်ကို သွားပြီး နှင်း ခေါင်းလေးကို ပွတ်ပြီး"နှင်း အဆင်ပြေရဲ့လား ….""Immensely ပါပဲ ကို ရယ် …"နှင်းရဲ့
မျက်နှာလေးက တဏှာ အခိုးအငွေ့ လေးတွေ့ ပြည့်နေတော့ ခေါင်းလေးကို ဆွဲပြီး နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းမိလိုက်တယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ နောက်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို
ချွတ်ချလိုက်ပါင်္ပြီ။ ပြီးတော့ တံတွေးတချက် ထွေးပြီး လီးပတ်ပတ်လည် နဲ့ဒစ်ကို ပွတ်ပြီး အရည်ရွဲအောင် လုပ်လိုက်တယ်။ ရှေ့ မှာကတော့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ အချစ်တွေ ဖလှယ်နေတယ်။ ဖူးဖေါင်းနေတဲ့ စောက်ပတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ လီးက တစ်ချက် ဆတ်ကနဲ တုန်တယ်။ နှင်းရဲ့ ခံစားမှုပျောက်သွားလို့ သတိရပြီး ကို နဲ့ နမ်းနေရာကနေ ခွာပြီး နောက်ကို လှည့်ကြည့်တော့ တော်တော်ကြီး ထွားပြီး ကော့ လန်နေတဲ့ လီးကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်နေတဲ့ မိုက်ကယ်ကို တွေ့ ရတယ်။မိုက်ကယ်က ရှေ့ ကို တစ်လှမ်းတိုးပြီး နှင်းခါးလေးကို ကိုင် စောက်ပတ်ဝမှာေ တ့ လိုက်တယ်။ နွေးပြီး တင်းနေတဲ့ ဒစ်ရဲ့ အရသာကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကို့ကို လှမ်းကြည့်တော့
ခေါင်း ညှိမ့်ပြတယ်။ နှင်းမျက်လုံးတွေ က ကို့ ကို ကြည့်နေမိတယ်။ လီးက အရှိန်ကို မပြင်းစေပဲ ခပ်ပျော့ပျော့ စိုက်ပြီး နှင်း စောက်ပတ်ထဲ တိုးဝင်လာတယ်။ နှင်းမျက်လုံးလေးတွေ ပြူးပြီး နုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး မျက်နှာလေးတွေ နီလာတယ်။ မိုက်ကယ် အဆုံးထိ တစ်ချက်ထဲ ထည့်တော့ နှင်း စောက်ပတ် နုတ်ခမ်းသားလေးတွေပါ လိပ်ပြီး ဝင်သွားတာ။ မိုက်ကယ်က အရသာခံပြီး ကြည့်လိုးနေတာပေါ့။ အဆုံးထိဝင်သွားတော့ နုတ်ခမ်းသားလေးတွေက လီးတစ်ချောင်းလုံးကို စုပ်ခွက်တစ်ခုလို ဖုံးဖိထားတယ်။ မကျက်တစ်ကျက်ဖြစ်နေတဲ့ နှင်း စောက်ပတ် အောက်နားလေး နည်းနည်းကွဲ နေတာလေး ပြန်ဟသွားတာ မိုက်ကယ်တွေ့ သွားတယ်။ လေးဖက်ထောက်ထားတာ ဆိုတော့ တော်တော် ရှင်းတယ်မြင်ရတယ်။နှင်းဖင်ဝလေးကိုလဲ တစ်ချက်လောက် သေချာစိုက်ကြည့်ပြီး တံတွေးတစ်ချက် မြိုချလိုက်တယ်။ နီစွေးစွေး ဖင်ဝလေးက ချလိုက်ရရင် တော်တော် ကောင်းမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အချိန်တော့ ယူရလ်ိမ့်မယ်။ စောက်ပတ် ထည့်တာတောင် နည်းနည်းကွဲတာ ဆိုတော့ စိုးစိုးကို ချတုန်းကတောင် တော်တော် သွင်းရတာ။ လီးကို နှင်းစောက်ပတ်ထဲ ခဏတော့ စိမ်သေးတယ်။ နှင်းနောက်ကျောက ဘော်လီ ကလစ်ကလေးကို ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်။ နို့ တွေကို ခြေ
မွပေးဖို့ကို မျိုးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကို မျိုးက အလိုက်တသိနဲ့ 
နှင်းနို့ လေးတွေ ကို ပွတ်သပ်ပြီး နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကို ဆော့ကစားပေးနေတယ်။ ကိုမျိုး ပေါင်ကြားကို ကြည့်တော့လဲ ဖေါင်းထနေတယ်။"အင့်…..""အင့်"ဗြွတ် …ဗြိစွတ်..စွတ်ပတ်..ပတ်…"ကောင်းလိုက်တာ ကို ရယ် မိုက်ကယ်….က…အ…အ..ရမ်း..လိုး…တာ ကောင်းတယ် ပြည့်ကျပ်…နေတာပဲ"နှင်းလဲ နောက်ကို အလိုက်တသိနဲ့ဖင်ကို ပြန်ပြန် ပြီး ကော့ကော့ပေးတယ်။"ပုံစံပြောင်းရအောင် ဟန်နီ…""အိုကေ…မင်းသဘောပဲ"နှင်းကို
ပက်လက် လန်စေပြီး ခုတင် စောင်းလေးကို ဆွဲယူဖို့လုပ်တော့ နှင်းစောက်ပတ်ထဲက ကျွတ်ထွက်လာတဲ့ လီးကြီးကတော့ နှင်းစောက်ရည်တွေ စိုလို့ ။ ပိုတောင် ကြီးလာသလိုပဲ။ အကြောတွေဆိုတာ ထောင်ထနေတာ။ အဲ့ဟာကြီးကို ကြည့်ပြီး…."ကို..နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူးနော်….""အင်းး.. နှင်း အဆင်ပြေနေတာပဲ မတော်လို့ မှမဟုတ်ပဲ""အာ…..
ကိုကလဲ" (နှင်း ရှက်ဝဲဝဲ မျက်နှာလေးက တော်တော်ကြာ အလိုးခံပြီး စောက်ပတ်ထဲ
က ထွက်မှပဲ ကျွန်တော် မိန်းမက ရှက်ရတယ်လို့ .. အရမ်းကို ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် နှင်းရယ် )မိုက်ကယ်က နှင်းကို ပေါင်ကားစေပြီး ကို က နှင်းခေါင်းအောက်မှာ သူ့ ပေါင်လေးကို ခံပေးထားတယ် ခေါင်းက အောက်ကိုလှမ်းကြည့်လို့ ရတဲ့ အနေအထားလေ။ နှင်းပေါင်နှစ်လုံးကို သေချာဖြဲပြီးတော့ စောက်ပတ် လျှက်ပေးနေသေးတယ်။"ကောင်းတယ် မိုက်ကယ်ရယ်.. ဟိုနေ့ က လိုးတုန်းကတော့ နှင်းဘာမှ မသိလို့ဒီလောက်ကောင်းတာကြီးကို မခံစားလိုက်ရဘူး"လျှာကို
အပြားလိုက်ထားပြီး စောက်ပတ် တစ်အုံလုံးကို လျှက်ပေးတာ။ ကောင်းတယ် ဖင်ကြားထဲကနေ လျှာကြီး တက်လာပြီး စောက်စိထိတော့မှ စောက်စိကို ဆွဲစုပ်တယ်။ အင်းးးးး ကောင်းးးးတယ်….. ဘယ်လို လုပ်နေတာလဲ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကိုမျိုးက သူ့ ဘောင်းဘီကို ဖင် တဝက် လောက် ဆွဲချွတ်ပြီး နှင်းကို ကြည့်ပြီး ဂွင်းထုနေတယ်။ နှင်းခေါင်းအောက်ကိုတော့ ခေါင်းအုံးလေး ထိုးထည့်ပေးတယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ စိတ်ကြိုက်ပေါ့။ ပေါင်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပူးကိုင်ပြီး ရင်ဘတ်ထိရောက်အောင် တွန်းထားပေးတယ်။ ဒူးခေါက်ခွက်လောက်ကို ကိုင်ပြီး မှုတ်ပေးနေတုန်းပဲ။ ကိုမျိုးကတော့ ဘောင်းဘီ တစ်ဝက်နဲ့နှင်းခံစားနေတာလေးကို
ကြည့်ပြီး လီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုက်ပေးနေတယ်။စွိ…"အာ….. အောင့်တယ် ဖြေးဖြေး အထဲမှာ အရမ်းကြပ်နေတယ်"ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပူးပြီးထည့်တော့ ကြားထဲ ကစောက်ပတ် နှစ်ခမ်းသားလေးတွေက ညှပ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး အကုန်ဝင်သွားတော့ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးကျားကြီး မာန်ဖီတဲ့အတိုင်းပဲ …ပြီးလဲပြီးရော
ခွေးထီးကြီးက ခွေးမကြီးကို အားရပါးရဆောင့်သလို နှင်းပက်လက်အနေအထားမှာပဲ မိုက်ကယ်က ကုတင်အောက်ကနေ ကုန်းပြီး နှင်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ကို ထောက်တဲ့ ပုံစံပြောင်းပြီး ဆောင့်တော့တာပဲ။ နှင်းရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး လိုးနေရင်း နှင်း နုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေ မိုက်ကယ့်ကိုဖက်ထားပြီး အားရပါးရလိုး နေကြတော့ ကျွန်တော်တောင် ပြီးချင်သလိုဖြစ်သွားလို့လက်က လီးကို လွှတ်ပြီး ရပ်ထားလိုက်ရတယ်။ဖေါင်း…ဖေါင်း….ပတ်..ပတ်….ပြွတ်..စွိ..ဖတ်.ဖတ်.ဖတ်.."အင်းးးးးးဟင်းးးးဟင်းးးး"မိုက်ကယ်က
နှင်းပေါင်နှစ်ချောင်းကို အပ်ါကို ဆွဲယူပြီး သူ့ ဖင်လေးကို ကော့ပြီး လိုးလိုးပေးနေတယ်။ နှင်း တစ်ချီကောင်းကောင်းပြီးသွားလို့သူအရှိန်လျှော့ပြီး ဖြေးဖြေးလေး လိုးပေးနေတယ်။ "မိုက်ကယ် မင်းပြီးချင် ပြီးတော့လေ ရတယ်""အင်း…..""ငါ မင်း မပင်ပန်းတဲ့ ပုံစံလေးပြောင်းပြီး လိုးချင်တယ်""အင်း…ဘယ်ပုံစံလဲ"မိုက်ကယ်က
နှင်းကို ခုတင် အလယ်လောက်မှာ မှောက်ခုံဖြစ်အောင် နေရာပြောင်းပေးပြီး သူက ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်တဲ့ ပုံနဲ့အပေါ်က ခွခွပြီးထည့်တာ အဆုံးနီးပါးလောက်ထုတ်
ပြန်ထည့်နဲ့ "မျိုး မင်း မိန်းမက တောင့်တော့ ဒီ ပုံစံကို ငါတော်တော်ကြိုက်တယ်"(နှင်းနှင်းကတော့
ဘယ်လို ပုံစံလေးလဲဆိုတော့ စာဖတ်သူတွေ မျက်လုံးထဲ မြင်အောင်ပြောရင် ပိုပိုဟေသာလိုပုံ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရော ရုပ်တော့ နည်းနည်းပဲ ဆင်တယ် နှင်းနှင်းက ပို လှတယ်။ ပုံစံပြောပြချင်သာ ဖြစ်သည်…) ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးရဲ့ ပေါင်စိထားတဲ့ ကြားထဲက အကွဲလေးထဲ မိုက်ကယ့်လီး ဝင်ထွက်နေပြီး သိပ်မကြာပါဘူး။ မိုက်ကယ်လဲ ပြီးတော့တာပါပဲ။ နှင်းနှင်းကတော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲဆိုတော့ ထပ်ပြီးတာပေါ့။ မိုက်ကယ်လဲ ကျွန်တော့်မိန်းမပေါ် မှိန်းပြီး လီးစိမ်ထားပြီးတော့ မှောက်ချလိုက်တယ်။ ဖင်ကတော့ ညှစ်ပြီး လရည်တွေ အကုန်ထည့် နေသလိုပဲ။ မိုက်ကယ်က ခဏနေတော့ ထသွားတော့ နှင်းနှင်းက မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဇိမ်ခံနေသေးတယ်။ကျွန်တော်လဲ မနေနိုင်တော့ပဲ နှင်းနှင်း ဖင်သားတွေက ဖြဲလိုက်တော့ မိုက်ကယ့်လရည်တွေ က ကျွန်တော့်မိန်းမ စောက်ပတ်ဝမှာ ပြူနေတယ်။ အရည်တွေ ကိုတော့ တွေ့ နေတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ဖြစ်သွားတယ် မသိပါဘူး ကျွန်တော်လဲ နှင်းနှင်းပေါ်ကို ခွ ၊ မိုက်ကယ့် လရည်တွေ
ကို ရွံရကောင်းမှန်းမသိပဲ ကျွန်တော့်လီးက်ု ထိုးထည့်ပြီးအားရပါးရ ဆောင့်တော့တာပဲ။ လရည်တွေကများတော့ အပြင်တွေလဲ ကန်ထွက်တယ်။ စိမ့်ပြီးလဲထွက်တယ်။ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံမှာလဲ မိုက်ကယ့် လရည်တွေ တောင်စင်တယ်။ လိုးလို့ ကောင်းတယ်ဗျာ … ဒီတစ်ခါလောက်ကောင်းတာမရှိဘူး။
နှင်း မျှော်လင့်နေခဲ့တာပါ.. ကို့ လီးကို မိုက်ကယ် နဲ့ လိုးပြီးထည့်တော့ မှပဲ ကို့ ကို အရမ်းကို ပို ချစ်သွားပြီ…. ဆောင့်ပေးပါ ကိုရယ် နှင်းအရမ်းကောင်းနေတယ်"ဘယ်ကြာမလဲ "နှင်းကို ပြီးတော့မယ်""နှင်း ပါးစပ်ထဲ ပြီးလိုက်ပါကိုရယ်"နှင်းကို
ပက်လက်လှန်ပြီး နှင်းပါးစပ်ထဲ ကို မျိုးလီးကို ထည့်လိုက်တော့ နှင်းလဲ အားရပါးရ စုပ်ပေးတုန်း ကိုမျိုးလဲ လရည်တွေ ထွက်ကုန်တော့ နှင်းလဲ တစ်စက် မကျန်အောင် မျိုချလိုက်တယ်။ ကို့ ရဲ့ ပေါင်က ဟာတွေကော လဥက အရည်တွေ ကော လျှာနဲ့ လျှက်ပြီး အကုန် မျိုချလိုက်တယ်။ ကိုမျိုးနဲ့ မိုက်ကယ်ကတော့ နှင်းကို ရှုထောင့် တစ်နေရာစီကကြည့်လို့ ။ မိုက်ကယ် ငါ့မိန်းမ မျိုလိုက်တဲ့လရည်တွေ ကတော့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ လရည်တွေ ဖြစ်နေမှာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ စဉ်းစားမိမှာပါ။
ဒီလို နဲ့ပြီးသွားချင်ပေမယ့် မစိုးရဲ့ လင်တော်မောင် ကိုမောင် ရဲ့ ပြန်လည် ဆက်သွယ် မှု ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့ မိဘတွေဆီက တဆင့်ပေါ့။ ဘာလို့ ဆက်သွယ်တာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်မမွေးထားတဲ့ ကိုမောင် ရဲ့ သားလေးဟာ ကိုမောင်နဲ့ မှ ချွတ်ဆွတ်လေ။ သူနဲ့ ပဲ ရခဲ့တာပါ။ သူကမှ မယုံတာ။ သားလေးရဲ့ အဘွားဆိုတာ အရင်တုန်းကတော့ အဝင် အထွက် မရှိပေမယ့် သွေးကစကားပြောလာတော့လဲ .ပြန်လည်ပြီး တောင်းပန်တဲ့ မျက်လုံးတွေ ကို မြင်နေရတယ်။ ကိုမောင် ကတော့ သူ့ ဘက်ကတော့ ပြန်ပက်သက်ချင်တဲ့ အမှုအရာတွေ ပြပေမယ့် အဲလောက်တော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ သူနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က သူလိုးတဲ့ဟာ ကျွန်မဆီပို့ ကျွန်မလုပ်တာလဲ သူ့ဆီပို့ ဆိုပြီး လုပ်ထားခဲ့တော့ သူလဲ ဘယ်လောက်တောင် ကျွန်မကို ရွံရှာနေမယ်လို့ ကျွန်မ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။"စိုး....""ပြော ကိုမောင် နေကောင်းတယ်မလား ကောင်မလေးနဲ့ ကောအဆင်ပြေတယ်မလား""အဲဒါတွေက အပျော်တွေပါ ...""သြော် ""ကိုမောင် စိုးနဲ့ ပြန် ပေါင်းချင်တယ်""ရှင်......." (ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ စကားလေ)"မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ကိုမောင်""ဘာလို
့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ အပြစ် ဆိုတာ မြင်တဲ့လူမှ ပဲ အပြစ်ဖြစ်တာပါ. ကို က စိုး လုပ်ခဲ့တာတွေကို အပြစ်လို့ မှ မမြင်တာ""ကိုမောင် မသိတာတွေ အများကြီးပဲ""စိုး ဘာတွေ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ..""တစ်ခါနာဖူးသား....
.ကိုယ့်ရင်နဲ့ ဝမ်းနဲ့ လွယ်ပြီး မွေးခဲ့တာကိုတောင် ကိုမောင် မယုံကြည်နိုင်အောင် သံသယတွေ ရှိခဲ့တာပဲ ပြီးတာတွေတော့ ပြီးပါစေတော့ .... သားလေးကိုတော့ လာတွေ့ ပါ စိုးခွင့်ပြုပါတယ်""စိုး...""သွားတော့မယ် ကိုမောင်"
တစ်ယောက်ထဲ စဉ်းစားရတာခက်တယ် ဆိုပြီး အလုပ်ကျတော့ ကိုမျိုး နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တယ်။ သူ့ ကိုလဲ ကိုယ့်ကိစ္စတွေ ပြောပြပြီင်္း အကြံတောင်းခံကြည့်တာပေါ့လေ။ ကိုမျိုးကတော့ "အမဖက်က တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်မေးပြီး တွေးနွေးကြည့်ပေ့ါ မမ ၇ဲ့ မိဘတွေကကော""အရင်ထဲကလဲ
ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာလေ အမေတို့ ကတော့ မမ ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်ပြေမယ် မိသားစုစိတ်ချမ်းသာမယ် ဆိုရင်တော့ ကြိုက်တာသာလုပ် ဘာမှတော့မပြောပါဘူး""အခုတောင် မြေးလေးရှိလို့ သာ တရားစခန်းကို အလှည့်ကျ သွားနေကျတာ အဖေကတော့ ဘာမှန်းတောင် သိတာမဟုတ်ဘူး""အင်းလေ""သူ့ ကိုတော့ cuckold ဖြစ်မလား မဖြစ်ဘူးလား အမသိလား အကယ်လို့ဖြစ်နေရင်ကော""မပြောတတ်ဘူး မောင်လေးရယ်""တေ
့တေ့ဆိုင် ဆိုင် ဆွေးနွေးတာကတော့ ကောင်းပါတယ် မိုက်ကယ့် နဲ့ ကိစ္စတွေ ကိုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်ပေါ့ သူတောင် အမနဲ့ တုန်းက ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဖြစ်တာ မမခွင့်ပြုခဲ့တာပဲ ကြိုးစားကြည့်ပေါ့""အရင်တုန်းကလို စိတ်တော့ မမာတော့ပါဘူး အဓိက ကတော့ သားလေးပါပဲ အဖေနဲ့ တူတူကြီးပျင်းလာရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့""မိစုံဖစုံဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတယ် ""မမ သဘောပါပဲ ..""အင်း..မမ ဒီတစ်ခါတွေ့ ရင် မေးကြည့်ပါဦးမယ်"##########"ကိုမောင်""ပြော စိုး""ဟိုတစ်ခါပြောသလို အရာအားလုံးကို အရင်လို ပြန်ဖြစ်စေချင်တာလား""အင်းပေါ့""စိုးကတော့ ပြောရရင်တော့ မတွေ့ ရတဲ့ အချိန်တွေ အတွင်းမှာ .ကိုမောင် မသိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိတယ်""ပြောကြည့်လေ ကိုမောင် နားထောင်ရတာပေါ့"သူတို
့နှစ်ယောက်ကတော့ ကိုမောင်ရဲ့ အိမ်လေးမှာ စကားပြောဖြစ်နေတာပါ။ အောက်ထပ်မှာတော့ ကိုမောင့်အမေ နဲ့ သားကတော့ ဆော့နေကြတယ်။ အပေါ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောရအောင် ရှောင်ပေးထားတယ်။"ကိုမောင့်ကို ပြောရရင် စိုး အခု လုပ်နေတဲ့ အလုပ်က မိုက်ကယ်နဲ့ ...."..........."သြော် ကိုထင်တာထက်တောင် စိုးက လက်စောင်းထက်နေတာပေါ့""ဒီလိုပါပဲ ကိုယ်ရှင်သန်နေတဲ့ ကမ္ဘာထဲမှာတော့ ပျော်ရွှင်အောင် နေခဲ့ရတာပေါ့""ဘယ်လို လဲ သူတို့ နဲ့ ကို နဲ့ ""ဘာကို သိချင်တာလဲ ဘာလို့ မေးတာလဲ""တူတူနေတာ ဘာကွာခြားလဲ စိုးပြောတဲ့မိုက်ကယ်ရယ် ဟိုတစ်ခါ ဗီဒီယိုထဲက တစ်ယောက်ရယ်""နှစ်ယောက်လုံးကတော့
သူ့ ဟာနဲ့ သူ ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေချည်းပါပဲ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စမှာလဲ ဆရာရယ်လို့ လဲ မရှိတော့ ကိုယ်စိတ်ကျေနပ်အောင်ပဲ လုပ်ကြတာပဲ နှစ်ယောက်လုံးကိုတော့ satisfied ဖြစ်ပါတယ်""စိုးကကော ခု ကိုနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်ဖို့အကြောင်းကောရှိလား" "စိုးပြောရရင်တော့
ဒဏ်ရာတွေလို့ထင်နေရင်တော့ အမာရွတ်ပဲ မြင်နေမှာလေ။ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လို တွေးရင်တော့ အမာရွတ်ဆိုတာ အောင်မြင်မှုအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အမှတ်အသားလေ။ စိုးက ဒဏ်ရာတွေ များတယ်...။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်တယ်လို့ ပဲ ကိုယ့်ဖာသာ ထင်မှတ်ပါတယ်""ကိုလဲ စိုးနဲ့ အတူတူပါပဲ""ကိုမောင်က စိုးကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲဖက်လိုက်တယ်"ကိုမောင်က စကားတွေ ပြောမနေ ပါနဲ့ စိုးရယ် ဆိုပြီး အပေါ်ထက်လှေကားနားက အခန်းထဲကို ဆွဲခေါ်သွားတယ်။"စိုး....ကို့ ကို ခွင့်ပြုပါ..""ကိုမောင့် သဘောပါ.."မိနစ်
အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေ မရှိတော့ဘူး။ ပုံစံကတော့ 69 ပေါ့။ စိုးစောက်ပတ်လေးကို ကိုမောင်တစ်ယောက် သေချာကြည့်တော အရင်လိုပါပဲ။ လှနေတုန်းပဲ။ မျက်လုံးထဲ မြင်ရတာကတော့ စိုးအရင်ပို့ လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုထဲက မြင်ကွင်းတွေ။ စိုးပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ။ လီးကမတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတော့ လီးစုပ်ပေးနေတဲ့ စိုးတောင် အာခေါင်ထဲမှာ လှုပ်သွားတယ်။ သီးမလို ဖြစ်သွားလို့ မျက်ရည်တောင် ဝဲတယ်။"အဟွတ်..""ရလား..စိုး""အွန်းးးးးး"နောက်တော့
ကိုမောင့်နှုတ်ကမေးလာတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို စိုးဖြေမိတယ်။ လေးဖက်လေး ထောက်လို့ ပေါ့။ စိုးလေးဖက်ထောက် ဖင်ထောင်လိုက်ရင် ပြူထွက်လာတဲ့ စောက်ပတ်နဲ့ စောက်စိလေးတွေကို မြင်တဲ့ကောင်တွေ ပြေးမလိုးပဲ နေချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုရယ် ဘယ်နေပါ့မလဲ လိုးတာတောင် ဆောင့်ဆောင့်လိုးတာ။ သူတို့ က ညှာတာမဟုတ်ဘူး။ စိုးကလဲ အဲလို လိုးတာကို ကြိုက်တာမလား။ အင့်....ဖွတ်......ပတ် ပတ် ပတ်"အဲ့ထက်တောင် ပြင်းသေးတယ် မိုက်ကယ်ဆို လီးကြီးလို့စိုးဆို တစ်ခါတစ်ခါ ဖင်ထောင်လိုးခံပြီးရင် ပျော့ခွေသွားတာပေါ့""ကောင်းတယ်ကွာ စိုးရယ် လိုးရတာ အရမ်းကောင်းတာပဲ""ကောင်းလား တကယ်ကောင်းလို လား""ကောင်းတာပေါ့ ဒီမှာ ကြည့်ပါလား..."ကိုမောင်က
သူ့ လီးကို စိုးစောက်ပတ်ထဲမှာ တင်းပြတော့ အတွင်းသားတွေက ခံစားမိတယ်။ သူ တကယ် ကောင်းနေတာပဲ။ ကိုမောင်ကောင်းနေရင် အရင်တုန်းကလဲ အဲလို လုပ်တတ်တယ်။"ကိုမောင်.....ဖင်လိုးချင်လားးးး""ဟင် အရင်တုန်းကတော့ ကို တို့ တစ်ခါစမ်းတုန်းကတော့ သိပ်လုပ်လို့ မကောင်းဘူး ဘာဖြစ်လို့ လဲ စိုး ဖင်ခံချင်လို့လား""အင်း နှစ်ပေါက်လုံးခံချင်တာ နှစ်ယောက်က စိုးကို နှစ်ပေါက်လုံး လိုးတာ ခံချင်တာ ကိုမောင်ကသာ ခွင့်ပြုရင်ပေါ့""စိုး..အားးးးး တကယ် ပြီးတော့မယ် အရမ်းချစ်တယ် စိုးရယ်" "စိုးလဲအတူတူပါပဲ .....အခုအထဲမှာ အရည်တွေ အများကြီးပဲ ဘာဖြစ်လို့ လဲ sexမလုပ်တာ ကြာလို့ လား""မဟုတ်ပါဘူး
မလုပ်တာ ၂ရက်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ် စိုးကို လိုးနေရင်း ပြောရတာတွေ အရသာပိုရှိတယ် မျက်လုံးထဲမှာလဲ စိုးကို သူများတွေ လိုးတာတွေမြင်ယောင်နေတယ် အရမ်းကောင်းတယ်""စိုးလဲ အရမ်းကောင်းတယ် ကိုမောင်က သိသိကြီးနဲ့စိုးကို လိုးနေတော့ စိုးနှစ်ခေါက်တောင်ပြီးသွားတယ်""ထပ်လိုးချင်သေးတယ်....""အချိန်မရတော့ဘူး ကိုမောင် အိမ်ပြန်တော့မယ်""မပြန်နဲ့ တောလေ ကို ဝယ်ထားတဲ့ တိုက်မှာပဲ အတူတူနေကြတာပေါ့""ဘယ်သူက အတူတူနေမယ် ပြောသေးလို့ လဲ""စိုးက တူတူ မနေချင်သေးဘူးလား""နောက်တစ်ပါတ်လောက်မှပေါ့
လူကြီးတွေလဲ အမြင်ကောင်းအောင်လို့ ပေါ့ တော်ကြာ ဒီနေ့ အိမ်မှာတွေ့ တယ် နောက်ပြီး တူတူပြန်နေတယ်ဆိုတော့ မကောင်းသေးဘူးပေါ့" "အင်း ဒါဆို ကို နေပြည်တော် တက် ရဦးမယ် ၂ရက်လောက်ကြာမယ်""အင်း ပြန်လာမှပေါ့ ပြန်လာရင် မိုက်ကယ် နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် နောက်တစ်ယောက်ကလဲ အလုပ်ကပဲလေ""စိုးက မျက်နှာမပူပေမယ့် ကို ကတော့ မျက်နှာပူတယ်" "နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မိန်းမရှိတယ်""သြော်"
စိုး ဆိပ်ကမ်းက ကိစ္စတွေ ပြီးပြီလားအင်း နောက် နှစ်ရက်ဆို ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လို့ ရပြီအိုကေလေ နောက်အပတ်ထဲတော့ ငါတို့ ပစ္စည်းပို့ပေးနိုင်တာပေါ့ အဲဒါက အဆင်ပြေပါတယ်ဘာက အဆင်မပြေတာမျိုး ရှိမလဲ ငါ့ယောကျာင်္းက ငါနဲ့ ပြန်ပေါင်းတော့မယ် သူက မင်းရဲ့အကြောင်းတွေကို ငါပြောတာက မင်းနဲ့ မတွေ့ တဲ့ အချိန်က ကိစ္စ တွေကို သိလားအင်း ပြောပြလိုက်တယ် သူက အိုကေ တယ် တဲ့လားအင်းဒါဆိုလဲ ပြန်ပေါင်းလိုက်ပေါ့ ငါတို့ဒီအတိုင်းလေးပဲ ပြန်နေကြတာပေါ့ ငါတို့ က တစ်ယောက် လိုအင်တွေ အတွက် တစ်ယောက်က ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ ပါတနာတွေ ပဲလေကျေးဇူး မိုက်ကယ်No strings attached ပေါ့ စိုးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်တဲ့ အကူအညီတွေ တောင်းလို့ ရတယ်နော် ............ကျေနပ်ရဲ့လား ကို လုပ်ပေးတာအင်းကောင်းတယ်ကို နှင်းကို မိုက်ကယ်လိုးသလို လိုးပေးကွာဘယ်လိုလဲ ကုတင်စောင်းမှာ အားရပါးရဆောင့်လိုးပေးကွာဒါဆို လီးစုပ်ပေးးအင်းစုပ်ပေးမယ်....ကို့ လီးကို စုပ်ပေးရတာ အဆုံးထိ စုပ်ပေးလို့ ရပေမယ့်မိုက်ကယ့်လီးတော့ အကုန်မရလောက်ဘူးဘယ်ရမလဲ နှင်း၇ဲ့လီးကရှည်လဲ ရှည်တယ် ကြီးလဲ ကြီးတယ်အကုန်ထည့်ရင် နှင်း ဘယ်စုပ်ပေးနိုင်ပါ့မလဲ အင်းနောက်တစ်ခါကျရင် စုပ်ကြည့်ဦးမယ်အောင်မာ ဘယ်က နောက်တစ်ခါလဲ ....ကိုကလဲ တစ်ခါတစ်လေ သွားလိုးတာပေါ့ အမြဲတမ်းမှ မဟုတ်တာတော်ကြာကိုယ့် မိန်းမလေး စောက်ပတ် ချောင်သွားမှာပေါ့ အင်းလေ ကိုရဲ့ တစ်လမှ တစ်ခေါက်ပေါ့ အေးသွား..... နောက်တစ်ခေါက် မိုက်ကယ်ပေါ်တက်ခွရင် ဖင်တက်လိုးပစ်မယ်ကိုလုပ်ချင်ရင် လုပ်ပေါ့ တကယ်ပြောတာလား....ဖင်ကွဲအောင်လုပ်မှာနော်ပြီးမှ ကြောက်ပါပြီ မလုပ်နဲ့ လုပ် ..လုပ် ...တကယ်ပြောတာ အခုလဲ ဆောင့်ပေးလေကွာ .. ဘာလဲ နှင်းတက်ဆောင့်ရမလားဒါဆိုလဲ စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ အောက်မှာနေရင် ငြိမ်ငြိမ်မနေနဲ့နို့ တွေလဲ စို့ ပေးမိန်းမရဲ့ နို့ လေးတွေ ကို မမှီမကမ်းလေးစို့ ပေးလိုက် ဆွဲပေးလိုက်နဲ့ ကို ပြီးတော့မယ် .........အင့်ဟာ. ... အင့်ဟာာာအားး နှင်း ကောင်းတယ် အဲလိုလေး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ဆောင့်ပေး အားရတယ်ပြွတ်.....ပြွတ်ကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ ပြီးသွားပြီ ...ဒီပုံစံလေးက ထိတယ် ...အတော်ပဲ နောက်ဆို ဒီလိုပဲ ကို့ ကို ဆောင့်ပေးတော့မယ် နေဦး ကို မပြီးသေးဘူး.... ကိုလုပ်လေ....မှောက်ခုံနေပေးနော် နှင်းပလစ်.....အင်းဝင်တယ်ကိုလေ ဒီပုံစံလေးကို ခုမှ ကြိုက်တာဘယ်လို ဖြစ်လို့ လဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်..... နှင်းနောက်တစ်ချီတက်မလို့ အင်း နှင်းဖင်လုံးလေးတွေ က ဒီလို မှောက်ခုံေးနေပေးတော့ အရင် ဖင် နည်းနည်းကောက်သေးတော့ လိုးလို့ အရမ်းကောင်းတယ်ကောင်းရင် ဘာလို့ အစောကြီးထဲက ဒီလို လုပ်ပေါ့ ခုမှ အင်း ခြေထောက်ကို အရမ်းကြီးမစိနဲ့မိုက်ကယ်နဲ့ တုန်းကလို နည်းနည်းဟပေးးဟင်းးးးးးး လူဆိုးကြီး.. ကိုယ့် မိန်းမကို သူများလိုတာကြည့်ပြီး အတုယူလိုးနေတယ်သူကပိုသိတာကိုးးးးးးးးဟားဟားလုပ်ကွာ သွက်သွက်လုပ် ပြင်းပြင်းလေးထည့် ဒီမှာေ ကာင်းလာပြီ.... ....အားးးးးနှင်းကိ်ု မိုက်ကယ်လိုးတုန်းက နာလားမနာဘူး ခံလို့ ကောင်းတယ် အခုကော ....ကောင်းတယ် ....အခုလဲ ကောင်းတယ်လီးကြီးတော့ ပိုမကောင်းဘူးလားး နှင်းကလဲ....ဟာ ကောင်းတာကွာ အဲလို တစ်ချက်ချက်ကော့ကော့ပေးတာမိုက်ကယ်တုန်းက ကော့ချိန်တောင် မရှိဘူး..... မွေ့ ယာအောက်မှာ မြုပ်နေတာပဲ အားးးပြီး.........အရမ်းချစ်တယ် နှင်းရယ် နှင်းက ပို ချစ်တာပေါ့...သွားပါ လူလည်မလေး.......စိမ်ထားပေးကွာ...... အဲလိုလေးမှောက်ပြီးနေ ....ဘာလို့ လဲ ကောင်းလို့ .......မုန်တိုင်းတွေ ပြီးရင် လေပြေတွေ လာတတ်လားတော့မသေချာဘူး..... မုန်တိုင်းတွေ ကြီးရင်တော့ထမင်းထုပ်တွေ ဝေပေးတတ်တယ်.....အေးကွယ်.... အခုလို မိစုံဖစုံဖြစ်သွားတော့လဲ မြေးလေးဖို့ ပိုကောင်းတာပေါ့ သားတို့ သမီးတို့ လဲ နောက်ဆို သူ့ အခက်အခဲ ကိုယ့် အခက်အခဲ တွေကို နှစ်ယောက်အတူတွဲ ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေ....ပြီးခဲ့တာတွေလဲ ပြီးခဲ့ပါပြီ... ပိုကောင်းတဲ့ အနာဂါတ်ပဲ ဖြစ်ပါစေ......ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ..... မြေးလေးကိုတော့ စိတ်ချ... အခုလဲ အိပ်နေရှာတယ် ကဲ ဟန်းနီးမွန်ကိုလဲ စိတ်ချလက်ချသွားသားကိုမောင်.. ဧည့်ခံဖို့ ကိစ္စတွေကကော...အင်း လူရင် ၁၀ယောက်လောက်ဖိတ်ပြီးပဲ ဒင်နာလောက်ပဲ လုပ်မယ်လေအေးအေး အမေတို့ နဲ့ နေတယ်ဆိုတော့ လင်မယားနှစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာသာနေ ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါ အမေစိုးတို့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖြင်း ပွဲလေးကို လူအနည်းငယ်နဲ့ ပဲ လုပ်ဖြစ်သွားတယ် ပြီးရင်တော့ ငွေဆောင် ချောင်းသာ ဘက် တစ်ပတ်လောက် နေဖို့ တော့ စီစဉ်ထားတယ်လိုက်မဲ့လူတွေ လဲ ရှိတယ် .......ကိုမျိုးတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လဲပါမယ် ....ကိုမျိုးကတော့ မျက်နှာပူလို့ မလိုက်ချင်ဘူးပြောပါသေးတယ် ဒါပေမယ့် ကိုမောင် ကလဲ လိုက်ခဲ့ဖို့ဖုန်းဆက်ပြောတာနဲ့ ပဲ သူလဲ ငြင်းလို့ မကောင်းတာနဲ့ ပဲ .....နှင်းကိုမေးကြည့်တော့သွားတာပေါ့ သွားတာပေါ့ ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ခရီးဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.....